Qolka Madow Buluuga Casaanka Casriga ah8223 Daahyada Madadaalada Madow, Shiinaha Shiinaha Buluug Casaan Casri ah Qolka Madoobaadka Casriga8223 Soosaarayaasha daahyada Madadaalada, Shirkado, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Qolka Madow Buluuga Casaanka Casriga ah8223 Daahyada Madadaalada
LAVISH Design & PREMIUN QUANLITY - Daahkan mugdiga ah waxaa loo heli karaa midabbo kala duwan ama midabbo badan oo isku dhafan. Yaree wasakhda banaanka, sida tikniyoolajiyadda saddexda weji leh (Qalabaynta kuleylka ku habboon). Daahyadaan waxaa loo sameeyay si looga ilaaliyo alwaaxda / alwaaxda qorraxda / kuleylka tooska ah. Dharka laftiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan adduunka. Muuqaalka xarrago leh, waxay ku siinaysaa jawi raaxo leh oo raaxo leh qolka.
NOOCA XIRAN & KHATARTA CAADI BADAN –.waxay yihiin daah madow ama daah-furan. Miisaanka dharka waa 200gsm ilaa 320gsm. Daahyada madow ee indhashareerku waxay ka ilaalin doonaan iftiinka iyo qaboojinta guryaha xilliyada kuleylka kulul waxayna keydinayaan kharashka kuleylka iyagoo ka dhigaya qabowga inta lagu jiro bilaha jiilaalka.
Dharkeenna Tiknoolajiyadda Triple Weave Blackout waa iftiin iyo qulqulaya oo leh lakab khaas ah oo qarsoon oo xannibaya iftiinka hurdo nasasho leh. Marka waxay hubin kartaa in dadka aysan carqaladeyn doonin dibadda. Waxay ka joojin doonaan adduunka dibedda inuu u soo gurguurto daqiiqado gaar ah.